मोटाइन् रे विनिता – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
मोटाइन् रे विनिता
यतिखेर अभिनेत्री तथा मोडल विनिता बराललाई अर्को एउटा टेन्सन थपिएको छ । अग्र्यानिक तरकारी बेचेर कसरी आम्दानी गर्ने भन्ने चिन्ताकै अवस्थामा मोटाएपछि उनलाई टेन्सन थपिएको हो तर ‘चपली हाइट’ अभिनेत्री विनिता अप्रत्याशित रुपमा मोटाएकी भने हैनन् ।
विनिता केही अघिसम्म ४५ केजीकी थिइन् । यो वजन साधारणतया मोडलका लागि सुहाउँदो थियो तर अहिले उनी १० केजी मोटाएर ५० केजीकी भएकी छन् । कसरी मोटाइन् त हँ विनिता ? उनका प्रशंसक तथा शुभचिन्तकलाई चासो हुनु स्वभाविकै हो ।
कसैलाई पत्तै नदिईकन चलचित्र ‘सुपरहिट’ का निर्देशकसँग गोप्य विवाह गरेपछि उनी मोटाएकी हुन् । यसै भन्छन् चलचित्र बजारमा जान्ने मान्नेहरु । त्यसैले विवाह नै उनका लागि मोटाइको कारण हुन सक्छ । यो अनुमानित शंका मात्रै हो । हुन त विनिताले विवाह गरेको अmभै धेरैलाई पत्तो छैन । त्यो जरुरी पनि छैन किन कि विवाह भनेको नीजि हुन्छ नि कसो त विनिता जी ?
मिस लिटिल एञ्जल्सले फोटोसुट गरे (फोटो फिचर)
दर्शकलाई आफ्नो बनाउँदै पराई